သခင်မဲ့ဆာမူရိုင်း ဒါမှမဟုတ် လေလွင့်ဓါးသမားလို့ လူတွေသိကြတဲ့ ရိုနင်တွေအကြောင်း
3 Aug 2018 . 12:39 PM
ဆာမူရိုင်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အားလုံး ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ သိကြမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကတည်းက ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ရုပ်ပြကာတွန်းတွေနဲ့ ဝတ္ထုစာအုပ်တွေကနေတဆင့် တွေ့မြင်ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့ သိပ်ကိုရဲရင့်ပြီး သစ္စာတရားနဲ့ သိက္ခာတရားကို အလေးအနက်ထားကြတဲ့ ဂျပန်ပြည်က စစ်သူရဲကောင်းတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆာမူရိုင်းတွေအားလုံးကတော့ သိက္ခာတရားနဲ့ နေကြသူတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်ချို့သော ဆာမူရိုင်းတွေကတော့ ဆာမူရိုင်းဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီး လုပ်ကြံသူလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်တဲ့ ရိုနင် (Ronin) ဘဝကို ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရိုနင်ဆိုတာကို အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင် လေလွင့်နေတဲ့ ဆာမူရိုင်းဟောင်းတွေလို့ ခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း အကျယ်ဖြန့်ပြီး အနက်ဖွင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ ရိုနင်ဆိုတာဟာ သခင်မရှိတဲ့ ဆာမူရိုင်းကို ဆိုလိုခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ပဒေသရာဇ်ခေတ်ဖြစ်တဲ့ ၁၁၈၅ ခုနှစ်ကနေ ၁၈၆၉ ခုနှစ်အထိ ဆာမူရိုင်းတွေမှာ ဘူရှီဒို ရှိုရှင်ရှူ (Bushido Shoshinshu) လို့ခေါ်တဲ့ စည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီစည်းမျဉ်းကတော့ ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်ဟာ သူခစားရာအထက်ကသခင် သေဆုံးသွားရင် ဟာရာကီရီ (hara kiri) လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း သခင်မဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာ ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်ဟာ အဲဒီစည်းမျဉ်းကို မလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့ အထက်ကပြောသလို လေလွင့်ဆာမူရိုင်းဟောင်း ရိုနင်တွေဖြစ်လာကြပါတယ်။
တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းကတော့ တစ်ချို့သောဆာမူရိုင်းတွေဟာ တိုခုဂါဝါ ရှိုဂန်နိတ် (Tokugawa Shogunate) လို့ခေါ်တဲ့ အစိုးရကို ဆန့်ကျင့်ဖို့အတွက် ရိုနင်အဖြစ်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာ ခံယူတက်ကြပါတယ်။ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေမရှိ၊ လိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ စောင့်ထိန်းရမယ့် သိက္ခာနဲ့ သစ္စာတရားတွေမရှိတာကြောင့် ရိုနင်တွေဟာ လွတ်လပ်စွာပဲ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုနိုင်ငံရေးနဲ့ စစ်ရေးစစ်ရာတွေ ရှုပ်ထွေးနေချိန်မှာ တစ်ချို့သခင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ လက်အောက်ခံ ဆာမူရိုင်းတွေကို ရိုနင်အဖြစ် ခံယူခိုင်းကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့နာမည်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို မထိခိုက်ဘဲ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ အုပ်စိုးနေတဲ့စနစ်ကို ဆန့်ကျင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တိုခုဂါဝါအစိုးရ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလမှာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ စနစ်အသစ်တွေကို ပြည်နယ်အသီးသီးက ဒိုင်မျိုတွေနဲ့ အရှင်သခင်တွေဟာ မနှစ်မြို့တာကြောင့် ရိုနင်အရေအတွက်ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆာမူရိုင်းဆိုတဲ့ စစ်သူရဲကောင်းတွေဆီမှာရှိတဲ့ ကန့်သတ်ချက်အတိုင်း ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်ဟာ သူ့အထက်ကသခင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ အခြားသခင်တစ်ယောက်စီမှာ အမှုထမ်းခွင့်မရှိ ဆိုတဲ့ ဥပဒေကြောင့် ဆာမူရိုင်းအများစုဟာ လက်ရှိသခင်တွေဆီက ထွက်ခွာပြီး ရိုနင်အဖြစ်နဲ့ အစိုးရကို အတိအလင်း ဆန့်ကျင်လာကြပါတယ်။
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် သခင်သေဆုံးတာဖြစ်စေ၊ သခင်ရဲ့ စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံရတာမျိုးဖြစ်စေ၊ အစရှိတဲ့ ကိစ္စမျိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဆာမူရိုင်းတွေဟာ ပြဠာန်းထားတဲ့ဥပဒေအရ အခြားသခင်တစ်ယောက်အောက်မှာ အမှုထမ်းခွင့်မရှိတာကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုဖို့ လုပ်ငန်းရှာရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်ပညာရပ်နဲ့ ဓားရေးကျွမ်းကျင်မှုကလွဲပြီး အခြားဘယ်လိုပညာရပ်မှ မတက်ကျွမ်းတာကြောင့် သခင်မဲ့တဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေဟာ နောက်ဆုံးမှာ ရိုနင်တွေအဖြစ်နဲ့ အခကြေးငွေယူတဲ့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူ (assassin) တွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ ရိုနင်အများစုကတော့ ဓားနှစ်လက်ကို ခါးမှာချိတ်ဆွဲပြီး လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါတင်မက တစ်ခြားလက်နက်ပုန်းများစွာကိုလည်း အသုံးပြုကြပါသေးတယ်။ ငွေကြေးချို့တဲ့သူတွေကတော့ ဓားရေးလေ့ကျင့်ရာမှာသုံးတဲ့ ဝါးစိမ်းတုတ်အရှည်ကို လက်နက်အဖြစ်ကိုင်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာမှ နာမည်ကြီးတဲ့ ရိုနင်အဖွဲ့ကတော့ 47 Ronins ဆိုတဲ့ ရိုနင်လေးဆယ့်ခုနှစ်ဦးအဖွဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သခင်ဖြစ်သူ အဆနို နာဂနိုရိ (Asano Naganori) ဟာ ကီရာ ရိုရှီနာခါ (Kira Yoshinaka) လို့အမည်ရတဲ့ အစိုးရအရာရှိတစ်ယောက်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားမှုကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် (hara kiri) လုပ်ပြီး သတ်သေဖို့ တွန်းအားပေးခံရတဲ့အခါမှာ သခင်မဲ့သွားတဲ့ ဆာမူရိုင်း ၄၇ ဦး ရိုနင်တွေဖြစ်လာကြပြီး ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သခင်အတွက် အမှန်တရားကိုပြန်လည်ယူဆောင်ပြီး လက်စားချေဖို့ သစ္စာဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နှစ်ကျော် နှစ်နှစ်နီးပါး ပြင်ဆင်မှုတွေအပြီး ၁၇၀၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့၊ နှင်းမုန်တိုင်းတွေ တိုက်ခတ်နေတဲ့ ညတစ်ညမှာတော့ အဲဒီရိုနင် ၄၇ ယောက်ဟာ ကီရာရဲ့နေအိမ်ကို အုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီး အိမ်အရှေ့ဖက်က တစ်ဖွဲ့၊ အိမ်အနောက်ကတစ်ဖွဲ့ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထဲက လူအားလုံးကိုမသတ်ပဲ ကီရာနဲ့ သူ့ရဲ့နောက်လိုက် ၁၄ ဦးကိုသာ ကလဲ့စားချေတဲ့အနေနဲ့ သတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုဟာ တရားမဝင်ပေမယ့် ဂျပန်ပြည်အစိုးရဟာ အဲဒီရိုနင် ၄၇ ဦးရဲ့ ရဲရင့်မှု၊ သတ္တိနဲ့ တည်တံ့လှတဲ့သစ္စာတရားကို လေးစားတဲ့အနေနဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေရဲ့ထုံးတမ်းဖြစ်တဲ့ ဟာရာကီရီနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေစေဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး တိုကျိုမြို့ ဆန်ဂါခုဂျီ (Sengakuji) ဘုရားကျောင်းမှာ ရုပ်အလောင်းတွေကို မြှုပ်နှံစေခဲ့ပါတယ်။ ဆာမူရိုင်း ဒါမှမဟုတ် ရိုနင်တွေရဲ့ အခုလိုသမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းတဲ့အနေနဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ နာမည်ကျော်မင်းသား Keanu Reeves ဦးဆောင်တဲ့ 47 Ronins ရုပ်ရှင်ထွက်ရှိခဲ့တာကြောင့် ရိုနင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ လူတော်တော်များများနဲ့လည်း မစိမ်းတဲ့စကားလုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်အပြင် သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ နောက်ထပ်ရိုနင်တစ်ယောက်ကတော့ မီရာမိုတို မူဆာရှီ (Miyamoto Musashi) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ မသိတဲ့သူရှားပါးပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မီရာမိုတိုဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အတော်ဆုံးဓားသမားလို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပါပဲ။ အသက် ၁၃ နှစ်သား အရွယ်ကစလို့ တတ်ပေ့၊ ကျွမ်းပေ့ဆိုတဲ့ ဓားပညာရှင်တွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်နဲ့ စိန်ခေါ် စီးချင်းထိုးခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအနားယူတဲ့အချိန်အထိ ရှုံးပွဲမရှိခဲ့လို့ပါပဲ။ သူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေ၊ သင်ကြားမှုတွေဟာ သိပ်ကိုကောင်းမွန်သလို ဓားပညာမှာ ပြိုင်ဘက်မရှိဘွဲ့ကို ရခဲ့တာကြောင့် ဂျပန်သာမက ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာပါ အားလုံးအမှတ်ရနေကြတဲ့ ရိုနင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် ရိုနင်ဆိုတာ ဘာလဲ? လေလွင့်နေတဲ့ဆာမူရိုင်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်တွေကို သိရှိသွားလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြီးလည်း အခုလို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ဆောင်းပါးလေးတွေကို ပြန်လည်တင်ဆက်သွားမှာမို့ စောင့်မျှော်နိုင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Wine & Yan
သခငျမဲ့ဆာမူရိုငျး ဒါမှမဟုတျ လလှေငျ့ဓါးသမားလို့ လူတှသေိကွတဲ့ ရိုနငျတှအေကွောငျး
ဆာမူရိုငျးလို့ဆိုလိုကျတာနဲ့ အားလုံး ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ သိကွမှာပါ။ ကြှနျတျောတို့ငယျစဉျကတညျးက ရုပျရှငျဇာတျလမျးတှေ၊ ရုပျပွကာတှနျးတှနေဲ့ ဝတ်ထုစာအုပျတှကေနတေဆငျ့ တှမွေ့ငျရငျးနှီးခဲ့ကွတဲ့ သိပျကိုရဲရငျ့ပွီး သစ်စာတရားနဲ့ သိက်ခာတရားကို အလေးအနကျထားကွတဲ့ ဂပြနျပွညျက စဈသူရဲကောငျးတှပေေါ့။ ဒါပမေယျ့ ဆာမူရိုငျးတှအေားလုံးကတော့ သိက်ခာတရားနဲ့ နကွေသူတှတေော့ မဟုတျပါဘူး၊ တဈခြို့သော ဆာမူရိုငျးတှကေတော့ ဆာမူရိုငျးဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကိုစှနျ့လှတျပွီး လုပျကွံသူလို့ အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုနိုငျတဲ့ ရိုနငျ (Ronin) ဘဝကို ရှေးခယျြကွပါတယျ။ အဲဒီတော့ ရိုနငျဆိုတာကို အတိအကပြွောရမယျဆိုရငျ လလှေငျ့နတေဲ့ ဆာမူရိုငျးဟောငျးတှလေို့ ချေါဆိုရမှာဖွဈပါတယျ။ တကယျတမျး အကယျြဖွနျ့ပွီး အနကျဖှငျ့ဆိုရမယျဆိုရငျတော့ ရိုနငျဆိုတာဟာ သခငျမရှိတဲ့ ဆာမူရိုငျးကို ဆိုလိုခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဂပြနျပဒသေရာဇျခတျေဖွဈတဲ့ ၁၁၈၅ ခုနှဈကနေ ၁၈၆၉ ခုနှဈအထိ ဆာမူရိုငျးတှမှော ဘူရှီဒို ရှိုရှငျရှူ (Bushido Shoshinshu) လို့ချေါတဲ့ စညျးမဉျြးတဈခုရှိပါတယျ။ အဲဒီစညျးမဉျြးကတော့ ဆာမူရိုငျးတဈယောကျဟာ သူခစားရာအထကျကသခငျ သဆေုံးသှားရငျ ဟာရာကီရီ (hara kiri) လို့ချေါတဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုအဆုံးစီရငျခွငျးကို လုပျဆောငျရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျတမျး သခငျမဲ့သှားတဲ့အခြိနျမှာ ဆာမူရိုငျးတဈယောကျဟာ အဲဒီစညျးမဉျြးကို မလိုကျနာဘူးဆိုရငျတော့ အထကျကပွောသလို လလှေငျ့ဆာမူရိုငျးဟောငျး ရိုနငျတှဖွေဈလာကွပါတယျ။
တဈခတျေတဈခါတုနျးကတော့ တဈခြို့သောဆာမူရိုငျးတှဟော တိုခုဂါဝါ ရှိုဂနျနိတျ (Tokugawa Shogunate) လို့ချေါတဲ့ အစိုးရကို ဆနျ့ကငျြ့ဖို့အတှကျ ရိုနငျအဖွဈကို ရညျရှယျခကျြရှိစှာ ခံယူတကျကွပါတယျ။ ခမြှတျထားတဲ့ စညျးမဉျြးတှမေရှိ၊ လိုကျနာရမယျ့ကငျြ့ဝတျတှနေဲ့ စောငျ့ထိနျးရမယျ့ သိက်ခာနဲ့ သစ်စာတရားတှမေရှိတာကွောငျ့ ရိုနငျတှဟော လှတျလပျစှာပဲ အစိုးရကို ဆနျ့ကငျြကွပါတယျ။ အဲဒီလိုနိုငျငံရေးနဲ့ စဈရေးစဈရာတှေ ရှုပျထှေးနခြေိနျမှာ တဈခြို့သခငျတှဟော သူတို့ရဲ့ လကျအောကျခံ ဆာမူရိုငျးတှကေို ရိုနငျအဖွဈ ခံယူခိုငျးကွပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ အဲဒီလိုလုပျလိုကျတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့နာမညျနဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကို မထိခိုကျဘဲ လကျရှိအစိုးရနဲ့ အုပျစိုးနတေဲ့စနဈကို ဆနျ့ကငျြနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ တိုခုဂါဝါအစိုးရ အုပျခြုပျခဲ့တဲ့ကာလမှာ ပွောငျးလဲလာတဲ့ စနဈအသဈတှကေို ပွညျနယျအသီးသီးက ဒိုငျမြိုတှနေဲ့ အရှငျသခငျတှဟော မနှဈမွို့တာကွောငျ့ ရိုနငျအရအေတှကျဟာ ဂပြနျနိုငျငံမှာ မွငျ့တကျလာခဲ့ပါတယျ။ ဆာမူရိုငျးဆိုတဲ့ စဈသူရဲကောငျးတှဆေီမှာရှိတဲ့ ကနျ့သတျခကျြအတိုငျး ဆာမူရိုငျးတဈယောကျဟာ သူ့အထကျကသခငျရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြမရပဲ အခွားသခငျတဈယောကျစီမှာ အမှုထမျးခှငျ့မရှိ ဆိုတဲ့ ဥပဒကွေောငျ့ ဆာမူရိုငျးအမြားစုဟာ လကျရှိသခငျတှဆေီက ထှကျခှာပွီး ရိုနငျအဖွဈနဲ့ အစိုးရကို အတိအလငျး ဆနျ့ကငျြလာကွပါတယျ။
အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ သခငျသဆေုံးတာဖွဈစေ၊ သခငျရဲ့ စှနျ့ပဈခွငျးကို ခံရတာမြိုးဖွဈစေ၊ အစရှိတဲ့ ကိစ်စမြိုးဖွဈလာတဲ့အခြိနျမြိုးမှာ ဆာမူရိုငျးတှဟော ပွဠာနျးထားတဲ့ဥပဒအေရ အခွားသခငျတဈယောကျအောကျမှာ အမှုထမျးခှငျ့မရှိတာကွောငျ့ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးပွုဖို့ လုပျငနျးရှာရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စဈပညာရပျနဲ့ ဓားရေးကြှမျးကငျြမှုကလှဲပွီး အခွားဘယျလိုပညာရပျမှ မတကျကြှမျးတာကွောငျ့ သခငျမဲ့တဲ့ ဆာမူရိုငျးတှဟော နောကျဆုံးမှာ ရိုနငျတှအေဖွဈနဲ့ အခကွေးငှယေူတဲ့ လုပျကွံသတျဖွတျသူ (assassin) တှဖွေဈလာကွပါတယျ။ ရိုနငျအမြားစုကတော့ ဓားနှဈလကျကို ခါးမှာခြိတျဆှဲပွီး လကျနကျအဖွဈ အသုံးပွုကွပါတယျ။ ဒါတငျမက တဈခွားလကျနကျပုနျးမြားစှာကိုလညျး အသုံးပွုကွပါသေးတယျ။ ငှကွေေးခြို့တဲ့သူတှကေတော့ ဓားရေးလကေ့ငျြ့ရာမှာသုံးတဲ့ ဝါးစိမျးတုတျအရှညျကို လကျနကျအဖွဈကိုငျဆောငျတတျကွပါတယျ။ သမိုငျးကွောငျးတဈလြှောကျမှာမှ နာမညျကွီးတဲ့ ရိုနငျအဖှဲ့ကတော့ 47 Ronins ဆိုတဲ့ ရိုနငျလေးဆယျ့ခုနှဈဦးအဖှဲ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ သခငျဖွဈသူ အဆနို နာဂနိုရိ (Asano Naganori) ဟာ ကီရာ ရိုရှီနာခါ (Kira Yoshinaka) လို့အမညျရတဲ့ အစိုးရအရာရှိတဈယောကျကို ကိုယျထိလကျရောကျစျောကားမှုကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ (hara kiri) လုပျပွီး သတျသဖေို့ တှနျးအားပေးခံရတဲ့အခါမှာ သခငျမဲ့သှားတဲ့ ဆာမူရိုငျး ၄၇ ဦး ရိုနငျတှဖွေဈလာကွပွီး ကှယျလှနျသှားတဲ့ သခငျအတှကျ အမှနျတရားကိုပွနျလညျယူဆောငျပွီး လကျစားခဖြေို့ သစ်စာဆိုခဲ့ကွပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ တဈနှဈကြျော နှဈနှဈနီးပါး ပွငျဆငျမှုတှအေပွီး ၁၇၀၃ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၃၀ ရကျနေ့၊ နှငျးမုနျတိုငျးတှေ တိုကျခတျနတေဲ့ ညတဈညမှာတော့ အဲဒီရိုနငျ ၄၇ ယောကျဟာ ကီရာရဲ့နအေိမျကို အုပျစုနှဈစုခှဲပွီး အိမျအရှဖေ့ကျက တဈဖှဲ့၊ အိမျအနောကျကတဈဖှဲ့ ဝငျရောကျတိုကျခိုကျခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိမျထဲက လူအားလုံးကိုမသတျပဲ ကီရာနဲ့ သူ့ရဲ့နောကျလိုကျ ၁၄ ဦးကိုသာ ကလဲ့စားခတြေဲ့အနနေဲ့ သတျခဲ့ပါတယျ။ ဒီလုပျကွံသတျဖွတျမှုဟာ တရားမဝငျပမေယျ့ ဂပြနျပွညျအစိုးရဟာ အဲဒီရိုနငျ ၄၇ ဦးရဲ့ ရဲရငျ့မှု၊ သတ်တိနဲ့ တညျတံ့လှတဲ့သစ်စာတရားကို လေးစားတဲ့အနနေဲ့ ဆာမူရိုငျးတှရေဲ့ထုံးတမျးဖွဈတဲ့ ဟာရာကီရီနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသတျသစေဖေို့ ခှငျ့ပွုခဲ့ပွီး တိုကြိုမွို့ ဆနျဂါခုဂြီ (Sengakuji) ဘုရားကြောငျးမှာ ရုပျအလောငျးတှကေို မွှုပျနှံစခေဲ့ပါတယျ။ ဆာမူရိုငျး ဒါမှမဟုတျ ရိုနငျတှရေဲ့ အခုလိုသမိုငျးဝငျဖွဈရပျကို ပွနျလညျအသကျသှငျးတဲ့အနနေဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှဈမှာ နာမညျကြျောမငျးသား Keanu Reeves ဦးဆောငျတဲ့ 47 Ronins ရုပျရှငျထှကျရှိခဲ့တာကွောငျ့ ရိုနငျဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ လူတျောတျောမြားမြားနဲ့လညျး မစိမျးတဲ့စကားလုံးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဒီဖွဈရပျအပွငျ သမိုငျးတဈလြှောကျမှာ နာမညျကွီးတဲ့ နောကျထပျရိုနငျတဈယောကျကတော့ မီရာမိုတို မူဆာရှီ (Miyamoto Musashi) ပဲဖွဈပါတယျ။ သူ့ကိုတော့ မသိတဲ့သူရှားပါးပါတယျ၊ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ မီရာမိုတိုဟာ တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ အတျောဆုံးဓားသမားလို့ သတျမှတျခံထားရတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈလို့ပါပဲ။ အသကျ ၁၃ နှဈသား အရှယျကစလို့ တတျပေ့၊ ကြှမျးပဆေို့တဲ့ ဓားပညာရှငျတှေ တဈယောကျပွီးတဈယောကျနဲ့ စိနျချေါ စီးခငျြးထိုးခဲ့ပွီး နောကျဆုံးအနားယူတဲ့အခြိနျအထိ ရှုံးပှဲမရှိခဲ့လို့ပါပဲ။ သူ့ရဲ့အတှေးအချေါတှေ၊ သငျကွားမှုတှဟော သိပျကိုကောငျးမှနျသလို ဓားပညာမှာ ပွိုငျဘကျမရှိဘှဲ့ကို ရခဲ့တာကွောငျ့ ဂပြနျသာမက ကမ်ဘာ့သမိုငျးမှာပါ အားလုံးအမှတျရနကွေတဲ့ ရိုနငျတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီလောကျဆိုရငျ ရိုနငျဆိုတာ ဘာလဲ? လလှေငျ့နတေဲ့ဆာမူရိုငျးတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့သမိုငျးဝငျဖွဈရပျတှကေို သိရှိသှားလောကျပွီ ထငျပါတယျ။ နောကျထပျပွီးလညျး အခုလို စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ ဗဟုသုတဖွဈဖှယျဆောငျးပါးလေးတှကေို ပွနျလညျတငျဆကျသှားမှာမို့ စောငျ့မြှျောနိုငျပါတယျ။ ဖတျရှုသူအားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။